Vanovhaira Wallpaper — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
David • Kubvumbi 9, 2014 pa 2:52 pm • pindura
Tinotenda kuti kukopa. Chikomborero chaMwari mhuri yako uye ushumiri.
Enane † • Kubvumbi 12, 2014 pa 5:04 pm • pindura
Tinotenda kuti Wallpapers BRO. kuvada. Pane kure zvikuru nechinangwa kwavari kupfuura chete kuzvikudza, asi kuzvikudza pamusoro One King Chechokwadi, Jesu. Stay wakakomborerwa. †
Lee • Kubvumbi 16, 2014 pa 5:45 pm • pindura
Tinotenda kuti Wallpaper. Ndinotarisa kuti iwe uye murinde zvose zvaunoita. Ndinotenda Mwari kuti zvako zvakanaka romodel yakadaro
bhaudhi • Chikumi 9, 2014 pa 12:54 pm • pindura
I gotta kutaura Trip, Ndiri chaizvo vakaropafadzwa everytime I kukuteerera, ndirumbidze kwaMwari vachapenya you'r upenyu uye mhuri yako forver. Kudiwa ndinoti mwanakomana wako ndiye mumwe luckiest mu nyika pasi. Uye zvirokwazvo haasi robhoti. #116 #rhemaprocess @iamslizybolt
Pamela • Nyamavhuvhu 29, 2014 pa 5:59 pm • pindura
Mazvita Trip. Mashoko ako kwete chete kukudza Mwari asi dzinondibatsira kuramba Kusimbisa ukama hwangu naye. Rudo ruzhinji.
Chris • Gunyana 12, 2014 pa 4:43 pm • pindura
Hey BRO, guru feni, Mwari vakukomborere. Tiri umwe muna Kristu.
irenesalcedo • Gunyana 23, 2014 pa 4:52 pm • pindura
zita rangu riri Irene Salcedo, I kushumira States Army uye ndimire Fort Bliss, TX. Ini ndiri mumwe wenyu zvikuru fans.This gore mai vangu chirwere pachikuva 4 rwekenza yelymphoma Cancer. Paakaudzwa kutanga firimu, vanachiremba vakati zvakanga padanho 2, uye vakatanga chemo kubata naye pachikuva maviri. Recently vaienzanisa migumisiro kubva First kuongorora, iyo vakati yaiva mudariro 2, chaizvoizvo aiva mudariro 4. Yakanga chikanganiso chavo. mai vangu achiri kubatwa nokuda pachikuva 4 uye vachiri kuenda kuburikidza chemo. Kamwe chemo riri pamusoro iye achava kutanga nemwaranzi, uye hatigoni kuva dzakaripoteredza nokuda mazororo. All kuti ndinobvunza kwamuri vakomana, ndiko kunyengeterera utano hwake. Iye A muranda waMwari uye akaratidza sibilings yangu uye ini pachangu nzira yaIshe. Uye inotiyeuchidza zuva kuti Mwari ari Control, Ini chete kubvunza kuti iwe woramba naye muminyengetero yako, zita rake riri Yvonne Castro.
In Light kwake
Julia kutongokwizwa • Gumiguru 14, 2014 pa 9:38 ndiri • pindura
All zvandinoda ndiko 1:16 kuzvikudza Ishe wangu, kudada King yangu. Taura pamusoro 'im zuva nezuva nekuti Anomhanyira ichi chinhu! Tinotenda kuti Wallpaper, rwendo!
Fhil • Zvita 6, 2014 pa 4:49 ndiri • pindura
thankz bhasi, zvino dextop yangu kumashure kutarisa KUZVIKUDZA….